Edinson Cavani oo ku sii dhawaanaya Man United – STAR FM SOMALIA
Kooxda Man United ee dalka ingiriiska ayaa si wayn ugu sii dhawaanaysa soo xero galinta weerar yahanka kooxda PSG ee Edinson Cavani.
Cavani ayaa ku cadaadinaya maamulka sare ee PSG inay u ogolaadaan inuu isaga tago kooxda maadama uusan ku faraxsanayn ka ciyaarida garabka.
ESPN ayaa daaha ka qaaday in wakiilo ka socda Edinson Cavani ay xiriir la sameeyeen kooxda Man United si ay ugu qanciyaan inay la wareegaan laacib kaan reer Uruguay.
Man United ayaa isku diyaarinaysa inay dalab rasmi ah ka gudbiso Cavani maalmaha nagu soo aadan si ay ula wareegto suuqaan janaayo ama kan dambe ee xaggaaga.
United ayaa doonaysay inay la wareegto Edinson Cavani markii uu kooxda qabanayay tababare David Moyes laakiin kuma guulaysan waxaana muuqanaya in kooxdu ay u baahantahay weerar yahan caawin kara Martial iyo Rooney.